ILAY zatovolahy hitanao eto miaraka amin’ny apostoly Paoly dia i Timoty. Nipetraka niaraka tamin’ny fianakaviany tao Lystra i Timoty. I Eonika no anaran-dreniny ary i Loisa no renibeny.
Fanintelony izao no nitsidihan’i Paoly an’i Lystra. Herintaona teo ho eo talohan’izao, i Paoly sy Barnabasy dia tonga voalohany teto tamin’ny dia iray nanaovany fitoriana. Ary niverina indray izao i Paoly niaraka tamin’i Silasy namany.
Fantatrao ve izay lazain’i Paoly amin’i Timoty? ‘Tianao ve ny hiaraka amin’i Silasy sy amiko?’, hoy ny fanontaniany. ‘Afaka mitondra ny fanampianao ianao amin’ny fitoriana amin’ny olona any an-toeran-davitra.’
‘Eny’, hoy ny valin-tenin’i Timoty, ‘maniry handeha aho.’ Koa vetivety taorian’izay dia nandao ny fianakaviany i Timoty ary nandeha niaraka tamin’i Paoly sy Silasy. Nefa, alohan’ny hianarantsika ny amin’ny dian’izy ireo, dia aoka hojerentsika izay nitranga tamin’i Paoly. Fito ambin’ny folo taona teo ho eo izao no lasa hatramin’ny nisehoan’i Jesosy taminy teny an-dalana ho any Damaskosy.
Koa nanao dia an-jatony kilaometatra maro àry i Timoty mba hitoriana ny “vaovao tsara” sy hanorenana fiangonana kristianina maro. Rehefa hihalehibe ianao, moa va ianao ho mpanompon’Andriamanitra mahatoky sahala amin’i Timoty?
Asan’ny Apostoly 9:19-30; 11:19-26; As 13-17 toko faha-13 ka hatramin’ny faha-17; As 18:1-22.
Hizara Hizara Timoty: Mpanampy Vaovao An’i Paoly
my tant. 110